लमहीमा विज्ञान शिक्षण - Pradesh Today लमहीमा विज्ञान शिक्षण - Pradesh Today
फागुन १९, २०७५ प्रदेश टुडे
तुलसीपुर, १९ फागुन । एसईईलाई केन्द्रित गरेर परीक्षा तयारी, सिकाइ, पढाइको सहजताका लागि लमहीमा कक्षा १० का विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान शिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ ।
विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई विज्ञानको पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी दिने र परीक्षामा आत्मबल बढाउन यसो गरिएको हो । गोरखा स्कुल लमहीको व्यवस्थापनमा तथा आठराई, ओएसिस र नोभा पब्लिकेशनको सहयोगमा लमही क्षेत्रका क्षेत्रका विद्यालयका विद्यार्थी तथा विज्ञान शिक्षकहरुलाई के पढ्ने ? कसरी पढ्ने ? किन पढ्ने ? विज्ञान पाठ्यक्रम, प्रशनपत्र र उत्तरपुस्तिका, लेखनशैलीको बारेमा जानकारी गराइएको हो । कार्यक्रममा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीका विज्ञ डा चिन्तामणि पन्थीले दिएका थिए ।
कार्यक्रम संयोजक यमप्रकाश डाँगीको अध्यक्षता तथा लमही नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बासुदेव खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । प्रिन्सिपल लोकमान रिजालको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा गोरखा मोडेल स्कुल लमहीका सिईओ डा जीवराज आचार्य लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन विज्ञान शिक्षक समाज तुलसीपुरमा सचिव कमल भण्डारीले गरेका थिए । कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पब्लिकेशनका मार्केटिङ अफिसर ढुण्डीराज अर्यालले गराएका थिए ।
पूर्वाधारविना सवारी परिक्षण